Mirrors Nepal » जापानको युवामा यौनप्रति बढ्दो अनिच्छा, गहिरियो जनसङ्ख्या संकट
जापानको युवामा यौनप्रति बढ्दो अनिच्छा, गहिरियो जनसङ्ख्या संकट
३० फाल्गुन २०७४, बुधबार ११:३५
जापान विगतमा यसको उदार यौन संस्कारको लागि चर्चित थियो । यो लभ होटलको अवधारणा आविष्कार गर्ने देश हो ! तर यो देशको युवामा भने नयाँ परिवर्तन आइरहेको छ ।
एनो मात्सुई जापानमा बढिरहेको सम्बन्धविहीन युवाहरुको ठूलो समूहको एक प्रतिनिधी हुन् । पछिल्लो तथ्याङ्कमा १८ देखि ३४ वर्ष उमेर समूहका ६४% जापानी युवा कहिले सम्बन्ध नपरेको पाइएको थियो । सोही तथ्याङ्कमा सो समूहका ४३% युवाहरुले कहिले यौन सम्बन्धमा नराखेकोे पाइएको थियो ।
त्यसपछि हाम्रो भेट ४५ वर्षिया आर्टिस्ट रोकुदेनाशिकोसँग भयो । अघिल्लो पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने उनलाई हाम्रो पहिलो प्रश्न थियो – नयाँ पुस्तामा आइरहेको परिवर्तनले के उनलाई अचम्मित तुल्याउँछ ? “हो, ठूलो परिवर्तन देखिन्छ । मेरो पुस्ताको लागि यौन जीवनको महत्वपूर्ण हिस्सा हो । सम्बन्ध निर्माण सजिलो कुरा होइन । एक केटाले केटीलाई डेटको प्रस्ताव राखेबाट यो शूरु हुन्छ । तर धेरै केटाहरु आजकल यो प्रकृयालाई झन्झट मान्न थालेको जस्तो देखिन्छ । उनीहरु बरु पोर्न हेरेर सन्तुष्टी लिन थालेका छन् । ”
जापानको जनसङ्ख्या सन् २००८ देखि २०१५ को बीचमा रेकर्ड दश लाख घट्यो । घट्दो जन्मदर तर बढ्दो औसत आयूको कारणले यो देशमा ६५ भन्दा बर्ष उमेर माथिकाको जनसङ्ख्याको हिस्सा २५% पुगेको छ । विज्ञले त्यो हिस्सा बढेर ४०% सम्म पुग्न सक्ने बताउछन् । यो संसारको कुनै देशले पहिला नभोगेको अवस्था हो । यसले राज्यको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पार्छ भनेर अनुमान मात्र गर्न सकिने अवस्थामा छौ्र ।
अहिलेको दरमा जनसङ्ख्या घटेमा हालको १३ करोड जनसङ्ख्या घटेर सन् २१०० सम्म ४.६ करोड हुनेछ । सरकारले यो चिन्ताजनक अवस्था समाधान गर्न चासो राखेको छ । उसले युवाहरुमा विवाह प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । तर अध्ययनले अविवाहित युवामा मात्र होइन विवाहित जोडीबीच पनि यौन सम्बन्ध हुन छाडेको देखाएको छ । अध्यययनले ५०% विवाहित जोडिबीचमा पनि यौन सम्बन्ध हुन छाडेको जनाएको छ । त्यसको कारणमा २१% पुरुषले थकानलाई कारण देखाएका छन् । २३% महिलाले यौनलाई अनावश्यक झमेलाको रुपमा व्याख्या गरेका थिए । जापान विश्वमा सबैभन्दा लामो अफिस टाइम भएको देशमा पर्छ । लामो समयको कामले यौनमा असर पर्ने कुरा प्रमाणीत मनोवैज्ञानिक तथ्य हो । जापानमा धेरै कामले सम्बन्धमा असर पर्ने मात्र होइन ज्याननै जाने प्रसस्त घटनाहरु बाहिर आइरहन्छन् । गिर्दो श्रमशक्तिको नकारात्मक असर यो पनि हो , यहाँ विधमान श्रमशक्तिलाई लामो समय काम गराएर अभाव पुर्ति गर्न खोजिदैछ ।
आप्रवासीहरु प्रति लचिलो नीति भने जापानमा त्यति लोकप्रिय पाइँदैन । जापान विश्वमै सबैभन्दा समरुपी राज्य हो । यहाँ ९९% जनसङ्ख्या एउटै जातिका रहेका छन् । यो कारणले आप्रबासीको सम्बन्धमा यो राष्ट्र सधैं असहज मान्ने गर्छ । बहुसङ्ख्यक जनतामा लचिलो आप्रवासी नीति अलोकप्रिय रहेको अवस्थामा सरकारले यूरोप वा अमेरीकामा जस्तो आप्रवासन नीति लिने सम्भावना छैन । टोकियोको बाटोमा भेटिएकी एक युवतीले भनिन्, “म विदेशीहरुको विरोधी त होइन तर यो जापानी समस्या हो र यसलाई हामी आफैले समाधान गर्नुपर्छ ।”
जापान मात्र तिव्र गतिमा बृद्ध भइरहेको मुलुक होइन । आगामी पाँच वर्षमा विश्वका १३ राष्ट्रहरुमा ६५ वर्षभन्दा बढी उमेरका जनसङ्ख्या २०% हुनेछ । अमेरीकाले सन् २०३० मा सो स्थान प्राप्त गर्नेछ । त्यो बेला विश्वका ३४ राष्ट्रको त्यस्तो अवस्था हुनेछ । तर, तत्कालका लागि जापानले यसको नेतृत्व गरिरहेको छ । जापानले हाल लिने कदम भविष्यमा उस्तै समस्या भोग्दै गरेका राष्ट्रहरुका लागि उदाहरण हुनेछ ।